Atletico Madrid oo garaacday Juventus iyo Man city oo guul dirqi ah ka gaartay Schalke 04 +SAWIRO – Gool FM
Garsooraha dhex-dhexaadin doona kulanka Champions League ee Napoli iyo Liverpool oo la shaaciyey, xilli labada kooxood ay rikoor xun ka haystaan
DEG DEG: Feysal Xasan Xaashi oo isaga tagay kooxda Dekedda
De Jong oo si aan horey loo arag u amaanay da’ayarka Barcelona ee Ansu Fati
“Weli waxaan ku jirnaa bisha Sebtember, hadda ha dabaal dagina” – Guardiola oo fariin u diray Liverpool
“Isbar-bardhiga xiddigaha Messi iyo Sterling waa mid xad dhaaf ah” – Busquets
Luis Suarez oo noqday xiddiga saddexaad ee ugu goolasha badan Kooxda Barcelona Taariikhda horyaalka La Liga
Atletico Madrid oo garaacday Juventus iyo Man city oo guul dirqi ah ka gaartay Schalke 04 +SAWIRO
Bashiir February 20, 2019
(Yurub ) 21 Feb 2019 Kulamo ka tirsan tartanka champions league wareegiisa 16-ka ayaa caawa lagu ciyaaro garoomo ka tirsan Qaarada yurub waxaana fooda is daray kooxaha Atletico Madrid iyo Juventus halka kulan kale oo xiisa badan uu dhex maray kooxaha Scalke 04 iyo Man City .
Aan ku horeeno kulanka xiisaga badan ee Atletico iyo Juventus oo ay soo xaadireen taageerayaal badan oo labada dhinac ka kal socday , kulanka ayaa ahaa mid xiiso badan waxa uunaa qeebtiisii hore ee ciyaarta lagu kala nastay bar baro gool la’aan .
Atletico oo garoonkeeda lagu ciyaarayey ayaa soo bandhigtay qaab ciyaareed cajiib ah waxa ayna la soo shirtagtay saf aad u xoogan , balse dhowr isku day oo ay sameeyeen uma suura galin in ay gool ubadalaan .
Juventus oo u muuqata in ay difaac ku jirto marka loo fiiriyo qaab ciyareedkeeda qeebta koowaad ayaa iyaduna awoodi weysay gool qeebta koowaad .
Qeebtii koowaad ee ciyaarta ayaa lagu kala maray bareejo , ciyaartoyda labada koox ayaana u huleelay qolka labiska si ay u soo qaatan waqti nasiino oo ay bar bar socoto talooyin ay ka soo qaataan macalimiintooda.
Waxaa dib loo baastay qeebtii dambe ee ciyaarta , xiisaha iyo xamaasada kulanka ayaana halkiisa ka sii bilaabmay .
Atletico Ayaa la Soo gashay dar dar xoogan qeebtii dambe ee ciyaarta waxa Anya la yimadeen labo gool oo yareysay hamigii Juve ee tartankan .
Atletico Ayaa labada goolba ka heshay daafacyadooda dhexe ee Gimenez iyo Godin.
Juve Ayaa loo diiday in ay gool ku dhaliyaan ciida Spain ciyarta ayaana oh idlaatay 2-0 .
Dhinaca kale kooxda Man City ayaa ciyaar xiiso badan la qaadatay kooxda Schalke 04 oo markan soo tiigsaday wareega 16-ka Champions League oo ay muddo ugu dambeysay .
City ayaa gool kala hormartay Schalke waxana goola u dhaliyey weeraryahankooda Aguero dsqiiqadii 13-aad ee ciyaarta waxaana caawinteeda lahaa Devid Silva.
Kooxda garoonkeeda lagu ciyaarayey ee Schalke ayaa la timid goolka bar baraha ee ciyaarta waxa uuna ahaa gool rigoore ah waxaana u dhaliyey Bentaleb daqiiqadii 38-aad ee ciyaarta.
Inta aan loo gudbin qeebtii dambe ee ciyaarta City aya alaga dhaliyey goolkii labaad ee ciyaarta waxaana ka dhaliyey markale gool rikoore ah xidiga lagu magacaabo Bentaleb.
Qeebtii koowaad ee ciyarta ayaa sida lagu kala Maray , waxaana dib loo anba qaaday qeebtii dambe ee ciyarta waxaa calaamada casaanka loo taagay daafaca kooxda City ee Otamendi.
City ayaa waqti dambe heshay goolka bareejada waxaana u dhaliyey Sane oo gool la dhaliyey kooxdiisii hore .
Waqtigii dhimashada ee ciyarta City ayaa heshay goosha guusha ee ciyarta waxaana u dhaliyey Sterling, guy dambeen ciyarta yabaa oh idlaatau 3-2 oo ay guushu ku raacday City.
Shaxda rasmiga ah kulanka Champions League ee Atletico Madrid Vs Juventus
HORDHAC : Arsenal vs BATE Borisov Gunners oo halis ugu jirta in ay ka haraan tartanka